बन्द सफल पार्न सडकमा निस्किएका प्रचण्डले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, बालुवाटारमा तरङ्ग, ओलीलाई के भने ? — Sanchar Kendra
बन्द सफल पार्न सडकमा निस्किएका प्रचण्डले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, बालुवाटारमा तरङ्ग, ओलीलाई के भने ?
काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहले आयोजना गरेको बन्द सफल पार्न आफै सडकमा निस्केका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब देशमा संयुक्त आन्दोलन हुने चेतावनी दिएपछि बालुवाटारमा तरङ्ग पैदा भएको छ। उनले सम्भवतः फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन हुने बताएका छन् ।
एक महिनाअघि संसद बिघठन गरेर देशमा अस्थिरता ल्याउन खोजेका ओलीले संवैधानिक निकायहरुमा असंबैधानिक नियुक्ति गरेर अर्को मनपरी गरेको भन्दै उक्त कदमको विरोध गर्दै आफ्नो समूहले आहृवान गरेको आमहड्तालका क्रममा प्रचण्ड सातदोबाटो चोकमा पुगेर यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रचण्ड आफै सातदोबाटो क्षेत्रमा बन्द सफल पार्न निसकिएका छन् भने माधव नेपाल कोटेश्वर क्षेत्रमा छन् । त्यस्तै बागबजार रत्नपार्क क्षेत्रमा नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ सहितका नेताहरु खटिएका छन् । यही क्रममा कलंकी क्षेत्रबाट नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । प्रचण्ड–माधव समुहले नेतृ शाक्यलाई कलंकी क्षेत्रको कमान्डर तोकेको थियो ।
को नेता कहाँ कमाण्डर ?
त्यस्तै बल्खु क्षेत्रमा बेदुराम भुसालले मोर्चा सम्हालिरहेका छन् । तयस्तै सातदोबाटो क्षेत्रमा देव गुरुङ छन् । यता पुल्चोक क्षेत्रमा पम्फा भुसाल, कोटेश्‍वरमा लीलामणि पोखरेलले बन्दको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने चाबहिल क्षेत्रमा वर्षमान पुन र हरिबोल गजुरेल खटिएका छन् ।
त्यस्तै नारायणगोपालचोक महाराजगञ्‍जमा शक्ति बस्‍नेत, गोगबुमा भीम रावल, बालाजु क्षेत्रमा रघुजी पन्त र रत्‍नपार्क क्षेत्रमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनार्दन शर्माले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
बन्दका कारण प्रहरी प्रशासनले राजधानीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा आफुखुशी नियुक्ती र शपथग्रहण गराएको भन्दै दाहाल-नेपाल समूहले बिहीबार आम हड्ताल गरेको हो ।
बन्दका कारण बिहानैदेखि सडकमा गाडी चलेका छैनन् । केही सार्वजनिक गाडी भने बिहानी समयमा चलेका थिए । एम्बुलेन्‍स, अस्पतालका बस, खाद्यान्‍न, दुध, औषधीका गाडी, सञ्‍चारकर्मीका सवारी साधन चलेका छन् । ठाउँ ठाउँमा बाक्लो रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । कतिपय ठाउँमा प्रहरी र दाहाल-नेपाल समूहको घम्साघम्सी परेको छ ।
एकाबिहानै गोंगबुमा ट्याक्सी जलाए
प्रचण्ड-नेपाल समूहका कार्यकर्ताले गोंगबुमा एक ट्याक्सीमा आगजनी गरेका छन् । गोंगबुमा रोकिराखेको कुम्भनारायण श्रेष्ठको प्रदेश ३-०१-००२ ज ५८८१ नम्बरको ट्याक्सीमा उक्त समूहका कार्यकर्ताले आगजनी गरेका हुन् ।
बिहान ५ बजे ट्याक्सीमा आगजनी गरेका दुई जना फरार रहेका महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले इकागजलाई बताए । ट्याक्सीमा लगाएको आगो दमकल बोलाएर निभाइएको सिंहले जानकारी दिए । ट्याक्सी जलाउनेको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँबाट ७६ बढी पक्राउ
प्रचण्ड-नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हड्तालमा बन्द गराउँदै हिडेका ७६ बढी जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौँका विभिन्‍न ठाउँबाट प्रहरीले दाहाल-नेपाल समूहका ४० जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । उक्त समूहले आह्वान गरेको हड्तालमा बन्द प्रभावकारी बनाउन ठाउँ ठाउँमा कमाण्डर नै तोकेको छ ।
तर गृह मन्त्रालयले बजार व्यवसाय खोल्न आग्रह गर्दै बाक्लो सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । अनेरास्ववियू केन्द्रीय सदस्य रविनजंग बस्‍नेत विष्णु भट्टराई, तुलसी न्यौपाने, सिसम सुवेदी, दीपा जैसी, प्रदिप भण्डारी बागबजारबाट पक्राउ परेका छन् ।
वीरगञ्जमा रहबर अन्सारीसहित ८ जना पक्राउ
वीरगञ्जमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता-कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । पार्टीले घोषणा गरेको हड्ताल सफल बनाउन सडकमा निस्किएका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका अध्यक्ष रहबर अन्सारी, युवा नेता अरविन्द सिंह, विद्यार्थी नेता प्रभाकर गुपतासहित ८ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रहरीले भन्यो – तोडफोड र अवरोध भए जोसुकैलाई नियन्त्रणमा लिन्छौं
नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षले घोषणा गरेको आमहड्तालमा कुनै पनि किसिमको अवरोध वा तोडफोड भए जोसुकैलाई पक्राउ गरिने प्रहरीले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन प्राप्त भएको भन्दै प्रहरीले हिंसात्मक कार्य गर्ने जोसुकैलाई पक्राउ गरिने जनाएको हो ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सिंहका अनुसार बुधबार पसल तथा व्यवसाय खुले निर्वाधरुपमा सञ्चालनका लागि प्रहरीले सुरक्षासमेत दिनेछ । कुनै पनि अवरोध, आगजनी वा अन्य कार्य नहोस् भनेर अन्य समयभन्दा बढी सुरक्षा परिचालन गरिएको समेत उनले बताए ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख हरिबहादुर पाल शान्तिपूर्णबाहेकका गतिविधिलाई निषेध गर्ने गरी योजना बनाइएको बताउँछन् । ‘डर, धम्की देखाउने, जबरजस्ती रोक्ने जस्ता कार्यलाई प्रहरीले रोक्छ’, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पालले भने ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सडक संघर्षका कार्यक्रम गरिरहेको प्रचण्ड-नेपाल समूहले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै नेपाल बन्दको घोषणा गरेको हो । बन्दका कारण सबैभन्दा ठूलो मारमा विद्यार्थी र मजदुर परेका छन् । परीक्षा भएका कारणले बन्दले हिडेर परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्न समस्या छ ।
प्रचण्ड-नेपाल समूहका प्रवक्ता तथा संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले परिचय पत्रका आधारमा परीक्षा दिन हिडेका विद्यार्थीलाई हिड्न दिने बताएका छन् । प्रचण्ड-नेपाल समूहले नेपाल बन्दको आह्वान गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयले भने बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ ।